Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးသူ ၆၂ ဦးရှိကြောင်း အာဏာပိုင်တွေ အတည်ပြု
“ ၆၂ ယောက်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာသတင်းက တချို့ကလည်း အဲဒီလိုပေါ့။ ဆေးရုံတက်တာ တချို့ကလည်း မဆုံးပဲနဲ့၊ အခုဆိုရင်ဗျာ စဖြစ်တုန်းက မောင်တော က ဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်လတ်တို့ ဆုံးတယ်ဆိုပြီး သတင်းတက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲတာတွေက မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဆိုတော့ အဲတာမျိုးလေးတွေပေါ့”
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:19
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးသူ ၆၂ ဦးရှိကြောင်း အာဏာပိုင်တွေ အတည်ပြု . All Rights Reserved